एनएमबी लघुवित्तको नाफा १०४.४२%ले बढ्यो, ईपीएस घटेर रु. २७.५५ मा सीमित
काठमाण्डौ । एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको मंगलबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०४.४२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
इन्फिनिटी लघुवित्तको नाफा ३५.३८%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा खुद नाफा ३५.३८ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। सोमबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको संस्थाले खुद नाफा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा १ करोड ६१...
कस्तो छ प्रथम त्रैमासमा स्वाबलम्बन लघुवित्तको वित्तीय अवस्था ?
काठमाण्डौ । स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा खुद नाफा ४.६४ प्रतिशतले बढाएको छ। सोमबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको संस्थाले खुद नाफा १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा १२ करोड २० लाख...
समता लघुवित्तको नाफा बढ्यो, खुद ब्याज आम्दानी घट्यो
काठमाण्डौ । समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको सोमबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २९४.५३ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २८ लाख ३६ हजार...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । लाभांश पारित र मर्जर प्रक्रिया थालनीको मुख्य अजेन्डासहित फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। संस्थाको हिजो शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आउँदो मंसिर १८ गते काठमाण्डौको भाटभटेनीस्थित आम्रपानी ब्याङ्केटमा वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने...
गत आ.व.को मुनाफाबाट गुराँस लघुवित्तले लाभांश नबाँड्ने
काठमाण्डौ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ। संस्थाको गत शुक्रबार (कात्तिक २१ गते) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरणका लागि प्रस्ताव नगरिएको...
मिथिला लघुवित्तको नाफामा उछाल, ईपीएस रु. ५१.७९
काठमाण्डौ । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको शुक्रबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २४२.४९ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ४६ लाख...
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको नाफा थोरै बढ्यो, रिजर्भमा छलाङ
काठमाण्डौ । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४.८८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
मेरो माइक्रोफाइनान्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बठकले कुल १७.८३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लभांशमा चुक्तापुँजी ८५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँको १६.९३ प्रतिशतले हुन...
स्वेदशी लघुवित्तको नाफा ७४.१२%ले बढ्यो, रिजर्भ ३२.६८%ले घट्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७४.१२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
प्रथम त्रैमासमा आरएमडीसी लघुवित्तको खुद नाफा घट्यो, ईपीएस रु. २३.४३
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १७.५८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
बेष्ट फाइनान्सबाट सीईओ अधिकारी बाहिरिए
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका तोयराज अधिकारी जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । तोकिएको सेवाअवधि सकिएपछि अधिकारी आफैं आज सोमबारदेखि जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका हुन् । कुशल बैंकरको छवि बनाएका अधिकारीले बैकिङ क्षेत्रमा करिब २ दशकको अनुभव हासिल गरेका छन । माछापुच्छ्रे बैंकबाट बैकिङ...
भोलिबाट सारथी नेपाल लघुवित्तको सेयर कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ । दुई वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएर बनेको सारथी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर कारोबार भोलि सोमबारदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा आउने भएको छ। साविकको नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएर सारथी नेपाल लघुवित्त बनेको हो। यी दुवै संस्था आपसमा १ः१ अनुपातमा गाभिएका हुन्। नेपाल स्टक...
सामुदायिक लघुवित्तको नाफामा पहिरो, जगेडा पनि ३१.१५%ले घट्यो
काठमाण्डौ । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा ह्वात्तै घटेको छ। संस्थाको बिहीबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८३.०३ प्रतिशतले घटेको हो। समीक्षा अवधिमा संस्थाले ११ लाख २० रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ६६ लाख ३ हजार...